Football Khabar » मेस्सीलाई उपाधि जिताउने इच्छा : के सिमोनी अर्जेन्टिनाको प्रशिक्षक बन्दैछन् ?
मेस्सीलाई उपाधि जिताउने इच्छा : के सिमोनी अर्जेन्टिनाको प्रशिक्षक बन्दैछन् ?
एथ्लेटिको मड्रिडका अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक डिएगो सिमोनीले आफू अर्जेन्टिनाको प्रशिक्षक बन्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । उनले लिओनल मेस्सीको तारिफ गर्दै उनीजस्ता खेलाडीलाई प्रशिक्षण गर्न पाउनु खुसीको कुुरा हुने बताएका छन् ।
सिमोनीले आफ्नो देशका सुपरस्टार मेस्सीलाई विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी पनि भनेका छन् । ‘मेस्सी विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी हुन् । मसँग उनीजस्ता खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिने इच्छा नहुने कुरै हुँदैन,’ टिवाईसी स्पोर्टस्सँग कुरा गर्दै सिमोनीले भनेका छन् ।
तर, अर्जेन्टिनी फुटबल संघले आफूलाई आजसम्म प्रशिक्षकका लागि प्रस्ताव नगरेको सिमोनी बताउँछन् । ‘आजसम्म मलाई उनीहरूले यो जागिरका लागि प्रस्ताव गरेका छैनन् । सायद समय आएको छैन होला । तर, अर्जेन्टिनी टिम अहिले जुन अवस्थामा छ, म टोली सम्हाल्न इच्छुक छु,’ सिमोनीले भने, ‘तर, यो मेरो मात्रै चाहनाले हुँदैन । म हाल एथलेटिको मड्रिडको प्रशिक्षक हुँ । यहाँ ममाथि ठूलो जिम्मेवारी छ ।’
सिमोनीले मेस्सीले राष्ट्रिय टोलीबाट उपाधि जित्न नसक्दा आफूलाई पनि दुःख लागेको बताए । ‘उनी आजसम्म राष्ट्रिय टोलीबाट उपाधिविहीन बनिराख्नुपर्ने खेलाडी होइनन् । जसले विश्वको फाइनल खेले, कोपा अमेरिकाको तीन फाइनल खेले । तर, फुटबलमा भाग्यको पनि साथ चाहिन्छ,’ सिमोनीले भने, ‘अर्जेन्टिनी टोली सम्हालेर मेस्सीलाई उपाधि जिताउने मेरो इच्छा छ ।’
अर्जेन्टिनी टिमलाई सही तरिकाले चलाउन नसक्दा नतिजा नआएको सिमोनी बताउँछन् । ‘टोलीमा एकसे एक खेलाडी छन् । विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी त्यहीं छन् । ठूला क्लबका स्टार खेलाडीको बाहुल्यता छ । तैपनि, उपाधि छैन,’ सिमोनीले कारण औंल्याए, ‘मेरो विचारमा प्रशिक्षकको नेतृत्व सही नभएर हो । यसको अर्थ यो होइन कि, यसअघिका वा हालका प्रशिक्षक गलत छन् । मेरो आशय यो टिमलाई जस्तो प्रशिक्षक चाहिन्थ्यो, त्यस्तो हुन सकेको छैन भन्ने हो ।’
सिमोनीले यदि आफूलाई राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक बन्न अफर आए आफू तयार रहेको बताए । ‘यदि मलाई यस्तो प्रस्ताव आउँछ भने म जतिसुकै बेला पनि त्यहाँ पुग्नेछु,’ सिमोनीले थपे ।
सिमोनी सन् २०११ देखि लगातार एथ्लेटिको मड्रिडको प्रशिक्षक छन् । उनले अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोलीबाट सन् १९८८ देखि सन् २००२ सम्म खेल्दै १०६ खेलबाट ११ गोल गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति ६ श्रावण २०७६, सोमबार ०५:४३